श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन श्रीमती ? जानी राखौ – Krazy NepaL
September 25, 2021 43
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । श्रीमान श्रीमतीबीच शिष्टाचार वा म्यानरर्स जस्ता औपचारिकता किन आवश्यक छ ? तर श्रीमान श्रीमतीबीच सानो तिनो झगडा, मनमुटाव हुने कारण यहि नै हो ।
आपसमा अशिष्ट भाषाको प्रयोग गर्नाले अन्जानमा एकअर्कालाई अपमानित गरिरहेका हुन्छन् । यस्तोमा केहि कुराको ख्याल राख्नुपर्छ । जसले सम्बन्ध बलियो मात्र हुँदैन् । एकअर्काबीच सम्मान र प्रेम पनि बढ्छ ।
–एकअर्काको कुरामा ध्यान नदिने र नसुने जस्तो गर्नु नराम्रो बानी हो । एकअर्काको कुरा ध्यान नदिनु भनेको वास्ता नहुनु हो । यसबाट बच्नुहोस् ।
–हरेक कुराको टिकाटिप्पणी गर्नाले पनि बिस्तारै सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न गर्न सक्छ । कुनै कुरा प्रति असहमति भए पनि मायाले पनि भन्न सकिन्छ ।
–एकअर्काबीच कुरा हुँदा राम्रो शब्दको चयन गर्न जरुरी हुन्छ ।
–सरी, थ्याङ्क्यु, प्लिज जस्ता ‘म्याजिक वर्ड’ प्रयोग गर्नाले गुड म्यानर भएको हो भन्ने मात्र दर्शाउँदैन् सम्बन्ध बलियो पनि बन्छ ।
–घरमा कोहि पाहुना वा आफन्त भए उनीहरुको अगाडि आपसी व्यवहारमा सहजता र प्रेम झल्कनु जरुरी हुन्छ ।
–चिड्याउने नगर्नुहोस् । कहिलेकाहि ठट्टा गर्नु अलग कुरा हो ।
ठट्टाको बाहनामा अपमान गर्नाले आत्मसम्मानमा ठेस पुग्न सक्छ ।
–एकअर्काको परिवारको बारेमा केहि गलत कुरा नगर्ने । उनीहरुको सम्मान गर्न सिकौं । तब मात्र श्रीमान श्रीमतीबीचको सम्बन्धमा पनि सम्मान हुन्छ ।
–रिसाएको बेला केहि बोल्नुबाट बच्नुहोस् । यस्तो बेला जे पनि बोल्न सकिन्छ ।
त्यसैले शान्त भएपछि मात्र कुरा गर्नुस ।
–जति सक्नुहुन्छ बहस गर्नुबाट बच्नुहोस् । बहस धेरै हुँदा अशिष्ट र असभ्य भाषा बोलिन्छ । रिसको झोँकमा बोलेको अपशब्दले भावी जीवनमा पर्न जान्छ
–बदलाको भाव मनमा नराख्नुहोस् ।
पुरानो कुरा, भइसकेको कुरालाई लिएर बदलाको भावना नराख्नुहोस् । जुन सम्बन्धमा प्रेम, बिश्वास र सम्मान हुन्छ त्यहाँ बदलाको भाव हुनुहुँदैन् ।
–खानेबेलामा गफ नगर्नुहोस् । विस्तारै खाना चपाउँदै खानुहोस् । राम्रो मुड बनाएर खानुहोस् ।
खानेबेलामा गम्भिर र विवादास्पद मुद्दामा बहस नगर्नुहोस् ।
–मोबाइल म्यानरको पनि ख्याल राख्नुहोस् ।
विनाकारण एकअर्काको मेल वा म्यासेज चेक नगर्नुहोस् । फोन गर्दा ठूलोठूलो आवाजमा कुरा नगर्नुहोस् ।
–एकअर्काको अनुमती विना व्यक्तिगत सामान नचलाइदिनुहोस् ।
–समयको महत्व पनि बुझ्नुपर्छ । एकअर्कालाई धेरै कुराउनु पनि राम्रो होइन् ।
–आपसमा सेयरिङ र केयरिङको भावना हुनु जरुरी हुन्छ ।
एकअर्कालाई सपोर्ट गर्नुहोस् । इष्र्याको भावना नराख्नुहोस् । एकको सफलता दुबैको सफलता हो । त्यसैले बधाई दिने र सेलिब्रेट गर्ने गर्नुपर्छ ।
–एकअर्काको तारिफ गर्नुहोस् । कहिलेकाही सरप्राइज पनि दिनुहोस् ।
वैशाख १६ गतेदेखि जारी रहेको लकडाउन फेरि थपिने भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा सङक्रमण घटेपनि जोखिम अझै उच्च रहेको भन्दै लकडाउन लम्बिन सक्ने बताइएको छ ।
काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूबीच यस विषयमा छलफल भइरहेको छ। बिहान ९ बजेसम्म मात्र किराना पसल तथा तरकारी पसल खुल्दै आएकोमा अब एक घन्टा थपेर १० बजेसम्म खुल्न दिइने बारेमा छलफल भैरहेको बताइएको छ ।
अब हुने निषेधाज्ञा केही खुकुलो हुने बताइएको छ । काठमाडौं उपत्यका तीन जिल्ला वैशाख १६ गतेदेखि जारी निषेधाज्ञा जेठ ३१ गते सकिदैछ । अबको तीन दिनपछि यसअगाडी जारी गरेको निषेधाज्ञाको अवधि समाप्त हुदैछ । त्यसको पूर्वसन्ध्यामा छलफलहरू भइरहेको काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले बताए ।
‘मृत्युदर घटे पनि संक्रमणदरमा सुधार नआएको विश्लेषणका आधारमा निषेधाज्ञा लम्बिन्छ,’ पराजुलीले भने। निषेधाज्ञा लम्ब्याइएको साता कोरोना संक्रमणदर विश्लेषण गरिन्छ । ‘त्यसपछि निषेधाज्ञा के गर्ने भन्ने विषयमा आवश्यक निर्णय लिइन्छ,’ पराजुलीले भने।
जेठ ३१ सम्म जारी निषेधाज्ञापछि यसको मोडालिटीमा परिवर्तन ल्याइने सक्ने र सवारीसाधनमा जोरबिजोर लगाउन सकिने बताइएको थियो।
Prevश्रीमानलाई असाध्यै माया गर्छन यी ४ राशीका श्रीमती, हरेक पलमा दिन्छन् साथ
Nextआज असाेज ११ गते सोमवार, निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, हेर्नुहोस् दैनिक रा’शि’फल
” रानी’पोखरीमा किच’कन्या गाडेको जग माथि नै हात्ती’को मूर्ति किन बनाइयो ?”
“भिजाएर राखेको ज्वानोको पानी पीउदा १२ रोगको समस्याहरु दुर हुने (जानकारी पद्नुस )”
यसरी प्रयोग गर्नुहोस घिउकुमारी जस्ले अनुहार चम्किलो बनाउन सहयोग गर्दछ
जिरे खुर्सानिका मुखाँ हानु जस्तो शिवहरि पौड्यालबारे आयो दुखद खबर (23772)
बाहिर निस्केको पेटलाई भित्र पसाउन चाहानुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी ७ सजिला घरेलु उपाय ! (12823)